आउटलुक अफ हाउजिङ मार्केट अफ काठमाडौं २०१८–२०१९ सार्वजनिक
काठमाडौं, १५ असार । नेपाली रियल स्टेट क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि सक्रिय कम्पनी बृहत ग्रूपले काठमाडौं उपत्यकाको हाउजिङ बजारसम्बन्धमा एक विस्तृत अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बृहतले यसअघि पनि सन् २०१२ मार्च र सन् २०१५ अप्रिलमा उपत्यकाको हाउजिङ बजारसम्बन्धी यस्तै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
रियल स्टेट क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न किसिमका अध्ययन–अनुसन्धानमा ख्याती कमाएका अन्तर्राष्ट्रिय रियल स्टेट विज्ञ डा. सोपोन पोर्नचोक्चाईको नेतृत्वमा बृहत ग्रूपले यो अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ‘आउटलुक अफ हाउजिङ मार्केट अफ काठमाडौं २०१८–२०१९’ नाम दिइएको सो अध्ययन प्रतिवेदन काठमाडौंको सांग्रिला होटलमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा डा. सोपोनले अध्ययन प्रतिवेदनबारे सारांशमा प्रकाश पारेका थिए भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी उप–महानिर्देशक सरिता श्रेष्ठ मास्के, बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारी, सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव ओम धर्मानन्द राजोपाध्य लगायतले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी राखेका थिए । यस्तै, बृहत ग्रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले अध्ययन र सोको प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो र त्यसले निकालेका निष्कर्श तथा अध्ययनकर्ता डा. सोपोनले दिएका सुझावहरुबारे जानकारी गराएका थिए ।